प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. सम्बन्धि सम्पुर्ण सुचना, समाचारहरु तल उपलब्ध हुनेछन् ।
अब घरमै बसेर अस्पतालको टिकट काट्न सकिने, सिभिल अस्पतालबाट सुरु भयो सेवा
अब ठूला बन्दरगाहमा नेपाली झण्डावाला कन्टेनर !
‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै अब पानीजहाजले मालसामान ओसार्ने छन् ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा दिएको यो अभिव्यक्ति निकै चर्चित र विवादित बनेको थियो । वर्तमान कार्यकालमा पनि ओलीले पानीजहाजको मुद्दालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा लिएका छन् ।
प्रभु टिभी सञ्चालनमा-एचडी च्यानलहरु पनि उपलब्ध
६ महिनाको १६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रभु टिभी सञ्चालनमा-एचडी च्यानलहरु पनि उपलब्ध
प्रभु टिभी कलसाइन मार्फत डिभिबी-टिटु प्रविधिमा आधारित भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलहरु उपलब्ध हुने छन्। पहिलो चरणमा प्रभु टिभी काठमाडौं, चितवन र पोखरामा उपलब्ध हुने छ। त्यसपछि वुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका शहरहरुमा प्रशारण हुने छ।
This partnership aims to facilitate the farmers to buy quality inputs to bring transformation in production of crops and vegetables and help them link with the market.UNCDF believes that transformation in the agriculture sector and improvement in livelihoods of rural smallholder farmers is possible through the use of advanced technologies. With support from UNCDF, Sun Farmer Nepal in partnership with Prabhu Management will help farmers dramatically increase their income with modern agricultural solutions and digital finance.
प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउनेले पाए मोटरसाइकल र स्कुटर
प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिले दशै, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी ल्याएको उपहार कार्यक्रमको पहिलो र दोश्रो पुरस्कार क्रमशः धनुषाका छेदी मण्डल र दाङकी दिपा सेनले हात पारेका छन् । ‘बम्पर उपहार’स्वरुप मण्डलले यमाहाको स्यालुटो बाइक प्राप्त गरेका छन् भने दोश्रो पुरस्कार विजेता सेनले यमाहाकै रेजि स्कुटर प्राप्त गरेकी छन् । दुवै विजेतालाई प्रभु ग्रुपकी उपाध्यक्ष कुशुम लामाले उपहार प्रदान गरिन् ।
उपहार कार्यक्रमको निर्धारित समयको समाप्तीपछि गत कात्तिक २३ गते प्रभु ग्रुपकी उपाध्यक्ष लामाले बम्पर उपहारका विजेताहरुको नम्वरहरु लक्की ड्रमार्फत घोषणा गरेकी हुन् । लक्की ड्रको लागि कार्यक्रम अवधि भरीमा भएका सम्पूर्ण नम्बरहरुलाई समावेश गरी कम्प्युटरको माध्यमबाट मण्डल र सेन छानिएका हुन् ।
प्रभु मनि र जनसेवी लघुवित्तबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
१४ असोज, काठमाडौं । प्रभु मनि ट्रान्स्फर प्रालि र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा प्रभु मनि ट्रान्स्फरका तर्फवाट नायब महाप्रवन्धक रामेश्वर सापकोटा तथा जनसेवी लघुवित्तका तर्फवाट अध्यक्ष विकाश गौचनले हस्ताक्षर गरे ।
पर्वतको कुश्मा ९, मेलमिलापचोकमा प्रधान कार्यलय रहेको लघुवित्तको पर्वत, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम, कास्की, तनहु, लमजुङ्ग, र गोरखा जिल्लाको स्विकृति रहेको छ ।
सम्झौता पश्चात लघुवित्तका सवै शाखाहरुबाट प्रभु मनि ट्रान्स्फरको रेमिटेन्स सेवा दिने भएको छ । आगामी दशैंसम्ममा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बैंकको लक्ष्य छ ।
ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकरद्धारा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार शुरु
ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले श्रावण २ गते आइतबारदेखि नाम परिवर्तन गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले एक समारोहबीच प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको उद्घाटन गरेका हुन् ।
कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न थालेपछि अझ स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ ।
Interview of Ms Kusum Lama on "Bazaar Guru"
राष्ट्र बैंकको शिघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगेको क बर्गको ग्राण्ड बैंक औपचारिक रुपमै प्रभु बैंकमा गाभिएको छ । एक्वीजीसन प्रकृयाबाट सुरु भएको गाभिने प्रकृया मर्जरमा टुंगीएर गाभिएको हो । माघ २९ गते आजका दिनबाट ग्राण्ड बैंक र प्रभु बैंकबीच संयूक्त कारोबार ‘प्रभु बैंक’ का नामबाट सुरु भएको छ । अब ग्राण्ड बैंकको १५ वर्षको बैंकिङ यात्रा औपचारीक रुपमै समाप्त भएको छ ।
म्यानेजमेन्टको खरावीका कारण उक्त बैंक केहीबर्षयता डुवेको बैंकका रुपमा चिनिएको थियो । तर पछिल्लो समय प्रभु बैंकमा गाभिने भएपछि भने बैंकले नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।
फागुन २ बाट प्रभु-ग्रान्ड एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । प्रभु बैंकले फागुन १६ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । ग्रान्ड बैंकलाई गाभ्ने अन्तिम स्वीकृति पाएको भोलीपल्ट प्रभुले प्रति १० बराबर दुई कित्ता हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सुचना प्रकाशित गरेको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ६४ लाख १७ हजार ७७० कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो । बैंकले जारी गर्ने सेयर ग्रान्डका लगानीकर्ताले भने पाउँदैनन् ।
बैंकले विद्यमान चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २० करोड ८८ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । यो सेयर गत असोज २४ गतेमध्दा अघिल्लो दिनसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम भएका सेयरधनीले मात्र पाउने छन् ।
प्रभू ग्रुपद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
“रक्तदान नै जीवनदान हो ” भन्ने मुल नाराका साथ प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी ललितपुर रक्त संचार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सामाजिक कार्यमा पनि आफूलाक्ष्ई सक्रिय गराउँदै आएको प्रभू ग्रुप अन्तरगत प्रभू म्यानेजमेन्टले आफ्नै प्राङगढमा ‘सामाजिक कार्यमा प्रभुको साथ’ भन्ने नाराका साथ उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले भुकम्प पिडीत बिरामीहरुको सहयोगार्थ रक्क्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
उक्क्त कार्यक्रममा प्रभु मेनेजमेन्ट प्रा.लि., प्रभु मनी ट्रान्सफर र प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका अन्य संस्थाहरुमा कार्यरत ५० जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुले रक्क्तदान गरेका थिए ।